ထောပတ်… ဒိန်ခဲ…နွားနို့ …. နို့ ဆီ…. လေးမ တော့ စားချင်တာပဲသိတယ်….။
မပန်ရေ... ဘ၀က လွယ်တယ်။ သိုးလေးတော့ အဲဒီလိုမထင်ဘူး။ သေရတာ လွယ်ပြီး နေရတာတော့ ခက်တယ်ထင်တာပဲ။
မပန်ရေ မနေ့ထဲကရေးပေး မလို့ဘဲ
အကျိုးကြောင့် အကြောင်းဖြစ်တယ် -
နယူတန်ရဲ့ အက်ရှင် အန် ရီအက်ရှင်နိယာမလည်းမှန်တယ်-
ခရစ်တော်၏ သင်စိုက်ထားသမျှ သင်ပြန်ရိတ်ရလိမ့်မယ်ဆို တာလည်းမှန်တယ်-
တခါတခါ ယုတ္တိဗေဒက စည်းချက်ဝါးကျ ထကတယ်-
မမှန်တာက လောကပါလတရားရဲ့ စီမန်ပုံ ညံဖျင်းချက် တွေများပြောပါတယ်-
တခါတခါတော့လည်း အဲ့ဒီကံကြမ္မာဆိုတဲ့ကောင်ကြီးက ရေနစ်သူကို ၀ါးကူထိုးဆိုသလို စုပ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ အချိန်ကို တပြိုင်နက် လိမ့်ဝင်လာဘို့ အကွက်ကောင်းစောင့်နေသလိုကြီးပါ.. ဖြည်းဖြည်းလာကြလေ.. စုပြုံမလာကြနဲ့.. နားနားပြီးလာကြ...
ဥပါဒါန်က ခက်တယ် ဆိုတာကတော့ သေချာတာပေါ့ဗျ. :)
လေးမ သာမီးကတော့ လေ .. အကုန်တော့ စားနဲ့ ၀မ်းလျှောတတ်တယ်နော်
သိုးလေးရေ .. ဘ၀က လွယ်တယ် . ဥပါဒါန်ကြောင့် ခက်နေတာတဲ့။ တကယ်တော့ ဆရာ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်ရဲ့ စာတစ်ခုထဲက ထင်ဟပ်ထားတာပါ။
မောင်တက်.. လောကပါလတရား စီမံပုံညံ့ဖျင်းချက်ဆိုတာလေး မျက်ခုံးပင့်သွားတယ်..